တဲ့အခါအဲဒီ Devlin McAliskey - အိုင်းရစ်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူ
လူသိများ: အိုငျးရစျတက်ကြွလှုပ်ရှားသူဗြိတိသျှပါလီမန်မှရွေးချယ်တင်မြှောက်အသက်အငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦး (သူမအသက် 21 နှစ်အရွယ်မှာ)
ရက်စွဲများ: ဧပြီလ 23, 1947 -
အလုပ်အကိုင်: လှုပ်ရှားသူ; အလယ်အလတ် Ulster, 1969-1974 ကနေအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်, ဗြိတိသျှပါလီမန်,
တဲ့အခါအဲဒီဂျိုးဇက် Devlin, တဲ့အခါအဲဒီ Devlin McAliskey, တဲ့အခါအဲဒီ McAliskey, မစ္စစ်မိုက်ကယ် McAliskey: ဒါ့အပြင်အဖြစ်လူသိများ
တဲ့အခါအဲဒီ Devlin McAliskey အကြောင်း
တဲ့အခါအဲဒီ Devlin မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်တစ်ဦးအစွန်းရောက်အမျိုးသမီးနှင့်ကက်သလစ်လှုပ်ရှားသူပြည်သူ့ဒီမိုကရေစီိံတစ်တည်ထောင်သူဖြစ်ခဲ့သည်။
တဦးတည်းရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရဖို့ကြိုးပမ်းမှုမအောင်မြင်ခဲ့ပြီးနောက်သူမတစ်ဦးဆိုရှယ်လစ်အဖြစ်အပြေးအစဉ် 1969 ခုနှစ်တွင်ပါလီမန်မှရွေးချယ်တင်မြှောက်အငယ်ဆုံးအမျိုးသမီးတစ်ဦးဖြစ်လာခဲ့သည်။
သူမကအရမ်းငယ်စဉ်အခါကသူမ၏ဖခင်အိုငျးရစျသောနိုင်ငံရေးသမိုင်းနှင့် ပတ်သက်. သူမ၏အများကြီးသင်ပေးတယ်။ သူမသာကိုးနှစ်အရွယ်မှာသူဟာသက်သာချောင်ချိရေးအပေါ်ကလေးခြောက်ယောက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ရန်သူမ၏မိခင်ထွက်ခွာ, အနိစ္စရောက်လေ၏။ သူမသည်အဖြစ်သက်သာချောင်ချိရေးအပေါ်သူမ၏အတွေ့အကြုံကိုဖော်ပြထား "ပျက်စီးခြင်း၏နက်နဲသောပင်လယ်။ " တဲ့အခါအဲဒီ Devlin တဆယ်ရှစ်တုန်းကသူမ၏မိခင်သေကောလိပ်ပြီးသွားစဉ် Devlin အခြားကလေးများအတွက်စောင့်ရှောက်မှုကူညီပေးခဲ့သည်။ သူမသည်တစ်ဦးကိုစတင်တည်ထောင်သူ, ဘုရင်မကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်မှနိုင်ငံရေးတွင်တက်ကြွစွာဖြစ်လာခဲ့သည် "လူတိုင်းအတွက်တစ်လျောက်ပတ်သောအသက်တာကိုခွင့်ရှိသင့်သောရိုးရှင်းသောယုံကြည်ချက်အပေါ်အခြေခံဘက်မလိုက်, Non-ကနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းက။ " အဆိုပါအုပ်စုသည်အထူးသဖြင့်အလုပ်အကိုင်အနှင့်အိုးအိမ်အခွင့်အလမ်းအတွက်စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရေးအယူဝါဒများနှင့်နောက်ခံကနေအဖွဲ့ဝင်ဆွဲငင်။ သူမသည်ထိုင်-ins အပါအဝင်ဆန္ဒပြပွဲများစုစည်းဖို့ကူညီပေးခဲ့သည်။
အုပ်စုသည်နိုင်ငံရေးဖြစ်လာပြီး 1969 ၏အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသို့ပွေးလေ၏။
Devlin Bogside ၏ကက်သလစ်အပိုင်းကနေရဲကိုဖယ်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သောသြဂုတ်လ 1969 "ဟုအဆိုပါ Bogside ၏တိုက်ပွဲ," ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ Devlin ထို့နောက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ခရီးထွက်ခြင်းနှင့်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နှင့်တွေ့ဆုံခဲ့သည်။
သူမသည်နယူးယော့ခ်မြို့မှသော့ပေးထားခဲ့သည် - နှင့်က Black Panther ပါတီသူတို့ကိုလက်သို့အပ်။ သူမပြန်လာသောအခါသူမသည်အဓိကရုဏ်းများနှင့်အဆီးအတားရန်လှုံ့ဆော်မှုအဘို့, Bogside စစ်တိုက်ရာတွင်သူမ၏အခန်းကဏ္ဍကိုများအတွက်ခြောက်လချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ သူမသည်လွှတ်တော်သို့တင်မြှောက်ခံရပြီးနောက်သူမ၏သက်တမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
သူမသည်သူမကြီးပြင်းခဲ့သည့်အတွက်လူမှုရေးအခြေအနေများအတွက်သူမ၏လှုပ်ရှားမှုများ၏အမြစ်များကိုပြသနိုင်ဖို့, 1969 ခုနှစ်, သူမ၏ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ, ငါ၏ဝိညာဉ်၏စျေးနှုန်းထုတ်ဝေခဲ့သည်။
"အပြီး 1972 ခုနှစ်တွင်တဲ့အခါအဲဒီ Devlin, အိမ်အတွင်းရေးမှူး Reginald Maudling စော်ကား သွေးထွက်သံယိုနင်္ဂနွေနေ့ ကဗြိတိန်တပ်ဖွဲ့များ၏အစည်းအဝေးဖွင့်ကိုဖဲ့သောအခါ" လူ 13 Derry သေဆုံးခဲ့သည်အခါ။
Devlin 1973 ခုနှစ်တွင်မိုက်ကယ် McAliskey လက်ထပ်နှင့်သူတို့ Devlin ဥရောပပါလီမန်နှင့်အိုင်းရစ်ဥပဒေပြုလွှတ်တော်သည် Dail Eireann အဘို့အနောကျပိုငျးနှစျထဲမှာမအောင်မြင်သို့ပွေးလေ၏ 1974 အတွက်အိုင်းရစ်ရီပတ်ဘလီကန်ဆိုရှယ်လစ်ပါတီတည်ထောင်သူတို့ 1974 ခုနှစ်ပါလီမန်တွင်သူမ၏ထိုင်ခုံဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ 1980 ခုနှစ်တွင်သူမ, မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နှင့်အိုင်ယာလန်သမ္မတနိုင်ငံအတွက်ချီတက်ပွဲဦးဆောင် Ira အစာငတ်ခံဆန္ဒပြ၏ထောက်ခံမှုနှင့်သပိတ်အခြေချခဲ့သည့်အောက်ရှိအခြေအနေများဆန့်ကျင်။ 1981 ခုနှစ်မှာအ Unionist Ulster ကာကွယ်ရေးအသင်းမှအဖွဲ့ဝင်များ၎င်းတို့၏နေအိမ်ဗြိတိသျှကြည်းတပ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးနေသော်လည်း, တိုက်ခိုက်မှုအတွက် McAliskeys လုပ်ကြံရန်ကြိုးစားခဲ့ကြပြီးအလေးအနက်ထားဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
ပိုပြီးမကြာသေးမီနှစ်များတွင် Devlin နယူးယောက်ရဲ့စိန့်ပက်ထရစ်နေ့ Parade အတွက်ချီတက်ရန်လိုသူဂေးနှင့်လိင်တူချစ်သူများများအတွက်သူမ၏ထောက်ခံမှုများအတွက်သတင်း၌ရှိ၏။ 1996 ခုနှစ်တွင်သူမ၏သမီးRóisín McAliskey ဗြိတိသျှကြည်းတပ်စစ်တန်းလျားတစ်ခု Ira ဗုံးဖောက်ခွဲမှုနှင့် ဆက်စပ်. ဂျာမနီမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်; Devlin သူမ၏ကိုယ်ဝန်သမီး၏အပြစ်ကင်းစင်ကန့်ကွက်နှင့်သူမ၏ပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။
သူမ entry ကိုများစွာသောအခြားကြိမ်ခွင့်ပြုခဲ့သော်လည်း "အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၏လုံခြုံရေးမှအလေးအနက်ခြိမ်းခြောက်မှု" 2003 ခုနှစ်မှာသူမဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကဝင်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားခဲ့သည်နှင့်လောကအတွက်၏မြေပြင်ပေါ်တွင်ပြည်နှင်ဒဏ်ပေး။
ခမညျးတျော: ယောဂျိမ်း Devlin (တဲ့အခါအဲဒီ9အခါသေဆုံး)
မိခင်: ဧလိရှဗက်တဲ့အခါအဲဒီ Devlin (တဲ့အခါအဲဒီ 18 တုန်းကကွယ်လွန်သွား)
Cookstown တှငျမှေးဖှား, ကောင်တီ Tyrone
စိန့်ပက်ထရစ်ရဲ့အကယ်ဒမီ, Dungannon, ကောင်တီ Tyrone
ဘုရင်မကြီးရဲ့တက္ကသိုလ်, ဘဲလ်ဖတ် (ကိုလေ့လာစိတ်ပညာ): 1965 ခုနှစ် - 1969 ခုနှစ်
ခင်ပွန်း: မိုက်ကယ် McAliskey (1973 လက်ထပ်; ဆရာမ)
ကလေးများ: Róisínဧလိရှဗက် McAliskey, Deirdre McAliskey အခြားတဦးတည်း
ဘာသာတရား: ရိုမန်ကက်သလစ် (Anti-ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်)
ကိုယ်တိုင်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ: ငါ့စိတ်ဝိညာဉ်၏စျေးနှုန်း။ 1969 ။
ငါသက်သက်ထိတ်လန့်ခဲ့သည်ကိုမွငျလြှငျအဘယျအကြှနျုပျ၏တုံ့ပြန်မှု: ရဲသရုပ်ပြမှာသူမ၏ကာကွယ်ပေးရန်ကြိုးစားခဲ့သူတစ်ဦးသည်လူကိုရိုက်ရှိရာအဖြစ်အပျက်အကြောင်းကို။ ငါသာရဲထိခိုက်အဖြစ်အမြစ်တွယ်ရပ်များနှင့်ရိုက်နှက်နှင့်နောက်ဆုံးမှာငါနှင့်တစ်ဦးရဲကိုတုတ်အကြားလာသောအခြားကျောင်းသားများကချွတ်ဆွဲငင်ခဲ့သည်နိုင်ဘူး။ ထိုနောက်ငါကျူးလွန်ခံရဖို့ရှိခဲ့ပါတယ်။
ငါမဆိုအလှူငွေရာ၌ခန့်ထားပြီလျှင်, ငါကသူတို့ဘာသာကိုမှသို့မဟုတ်၎င်းတို့၏လိင်မှဒါမှမဟုတ်သူတို့ကောင်းစွာပညာတတ်ရှိမရှိဆန့်ကျင်အဖြစ်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်ရှိလူများ, သူတို့ရဲ့လူတန်းစားမှကိစ်စတှငျမိမိတို့ထင်သောကွောငျ့ဖွစျသညျမျှော်လင့်ပါတယ်။
အဘယ်သို့ငါငါလုပ်ခဲ့တယ်ဆင်းရဲသောသူကိုရှိသည်သောညံ့လို့များ, ဒုစရိုက်ဖြေ၏ခံစားချက်ဖယ်ရှားပစ်ရခဲ့ကြောင်းမြော်လင့်ကြလော့ တစ်နည်းနည်းနဲ့ဘုရားသခင်ဖြစ်သို့မဟုတ်သူတို့ဟင်နရီဖို့ဒ်ကဲ့သို့ကြွယ်ဝသောမဟုတ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုများအတွက်တာဝန်ရှိသောခံစားမှု။
အဆိုပါလမ်စုန်းစမ်းသပ်မှု၏အဘိဂဲလ Williams က
ဒေါရစ် Kearns Goodwin
Aphra Behn ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိ
အမ်မလီ Dickinson Quotes
ပထမဦးစွာ Ladies: အနည်းဥပဒေမှခြွင်းချက်
ကို MOE အဘိဓါန်နဲ့အတူရိုးရာတရုတ်သင်ယူခြင်း
1974 ခုနှစ်အမေရိကန်ကိုဖွင့်: 'Wing Foot မှာအသတ်ခံရမှု' '
အဆိုပါအပျိုစင်မာရိရဲ့ Apparitions နှင့် Banneux, ဘယ်လ်ဂျီယံအတွက်အံ့ဖွယ်
Metals များ၏လုပ်ဆောင်ချက်စီးရီး: ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်း reactivity
ပန်းချီတစ် Waterbrush အသုံးပြုနည်းကိုဘယ်လို
မာကု Labbett, 'အဆိုပါ Chase' 'ပေါ်ခေါ်' 'သားရဲ' '
Orangutans အကြောင်း 10 အချက်အလက်
ဝီလျံ McKinley Fast Facts
'' una Furtiva Lagrima '' Lyrics နှင့်အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ခြင်း
သငျသညျဇာတိပျားကိုကူညီပါဖို့လုပ်ပါနိုင်သလား 12 အရာ
Roentgenium အချက်အလက် - RG သို့မဟုတ် Element ကို 111